Posted by Tranquillus | Déc 2, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Tibaaxo edeb leh: Qalad yar oo la iska ilaaliyo!
Warqadda daboolka ah, warqad mahadsanid, e-mail xirfad leh… Waxaa jira marar aan la tirin karin marka tibaaxo asluubaysan loo isticmaalo, labadaba xarfaha maamulka iyo kuwa iimaylka xirfadlayaasha ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tibaaxo aad u badan oo asluub ​​leh oo gacanta lagu hayo kuwaas oo ay ku jiraan iimaylka xirfadlayaasha ah oo aad si dhakhso ah u qallajin karto. Dufcaddan, waxaanu kugu aqoonsannay, qaar ka mid ah kuwaas oo ay tahay inaad mamnuucdo. Runtii faa'iido ma leh. Haddii aad rabto inaad hagaajiso tayada iimaylka ganacsigaaga, waxaad timid meeshii saxda ahayd.
Fadlan ii soo jawaab ama Mahadsanid horudhac: Qaababka asluubta ee la iska ilaaliyo
Waa khalad in la moodo in u mahadcelinta qofka ka sarreeya ama macmiilka ah ay ku dhiirigelinayso inay u hoggaansamaan codsigeenna ama codsigeenna. Laakiin dhab ahaantii, waxaan kaliya u mahadcelineynaa adeeg horey loo qabtay ee ma ahan caawinaad mustaqbalka.
Halka aad ku jirto xaalad xirfadeed, qaacido kastaa waxay leedahay muhiimaddeeda, waana inaan la dayacin saameynta nafsiga ah ee erayada. Fikradda runtii waa in la abuuro ballan-qaadka dhex-dhexaadiyaha. Xaaladdan oo kale, maxaad u isticmaali weyday lama huraanka?
Waxa aad isticmaali kartaa habkan inta aad edebaysan tahay. Halkii aad qori lahayd "Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada", waxa fiican in la yidhaahdo: "Fadlan ii jawaab" ama halkii "Ogow inaad iga soo gaadhi karto..." Waxa hubaal ah in aad u malaynayso in qaaciidooyinkani ay yihiin kuwo dagaal badan ama ku jira qaab madaxnimo.
Hase yeeshee, kuwani waa tibaaxo aad u soo jiidasho leh oo asluub ​​leh oo siinaya shakhsiyadda soo-diraha iimaylka ee jawi xirfadeed. Tani waxay ka duwan tahay iimaylo badan oo aan xamaasad lahayn ama loo arko inay aad u xishood badan yihiin.
Qaacidooyin asluub ​​leh oo leh dhawaaqyo taban: maxaa looga fogaanayaa iyaga?
"Ha ka waaban inaad ila soo xiriirto" ama "Waan hubin doonaa inaan kugu soo laabano". Kuwani waa dhammaan tibaaxo asluubaysan oo leh hadalo taban oo ay muhiim tahay in laga mamnuuco iimayladaada xirfadleyda ah.
Waa run in kuwani yihiin qaacidooyin togan. Laakiin xaqiiqda ah in si xun loo sheego mararka qaarkood waxay ka dhigtaa kuwo aan waxtar lahayn. Dhab ahaantii waxaa lagu caddeeyey cilmiga neerfaha, maskaxdeenu waxay u egtahay inay iska indhatirto diidmada. Qaababka taban nama riixaan ficilka oo inta badan way ka culus yihiin.
Markaa, halkii aad ka odhan lahayd "Dareen xor u ah abuurista akoonkaaga", waxaa aad u door bida inaad isticmaasho "Fadlan samee akoonkaaga" ama "Ogow inaad abuuri karto akoonkaaga". Daraasado dhowr ah ayaa runtii daaha ka qaaday in farriimaha togan ee lagu qaabeeyey qaabka xun ay dhaliyaan heerka beddelka aad u yar.
Adigoo hamiga ku jira inaad ku hawlgeliso wariyeyaashaada iimaylladaada xirfadleyda ah. Waxaad heli doontaa wax badan markaad doorato tibaaxaha xushmada leh. Akhristahaagu wuxuu dareemi doonaa walaac badan oo ku saabsan waanadaada ama codsigaaga.
Erayada asluubaysan si aad uga fogaato iimaylka xirfadlayaasha ah December 2, 2021Tranquillus
horeIimayl xirfad leh, iska ilaali qaacidooyinka la yaqaan!
socdaKelmadee edeb leh waa in ay raacdaa qaabdhismeedka "Pending..."?